येशूको कुरा लेख्ने मान्छेहरू | छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्
चित्रमा हेर त! यी मान्छेहरू को हुन्‌?— मत्ती, मर्कूस, लूका, यूहन्ना, पत्रुस, याकूब, यहूदा र पावल। यिनीहरू येशू ख्रीष्टको समयका मान्छे हुन्‌। यिनीहरूले येशूको कुरा लेखे। आऊ, हामी यिनीहरूबारे अझ धेरै सिकौं।
यिनीहरू को हुन्‌?
येशूको कुरा लेख्ने तीन जना मान्छे त उहाँसँगै प्रचारमा जाने प्रेषितहरू थिए। तिनीहरूको नाम के हो तिमीलाई थाह छ?— तिनीहरू मत्ती, यूहन्ना र पत्रुस हुन्‌। प्रेषित मत्ती र प्रेषित यूहन्ना येशूलाई राम्ररी चिन्थे। यी दुवै जनाले येशूको बारेमा एउटा-एउटा किताब लेखेका छन्‌। प्रेषित यूहन्नाले प्रकाश नाम गरेको किताब अनि पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना र तेस्रो यूहन्ना नामको किताब लेखेको थियो। प्रेषित पत्रुसले लेखेको दुइटा चिठ्ठीहरू पनि बाइबलमा छ। यी चिठ्ठीहरूलाई पहिलो पत्रुस अनि दोस्रो पत्रुस भनिन्छ। आफूले लेखेको दोस्रो चिठ्ठीमा प्रेषित पत्रुसले एउटा अचम्मको कुरा पनि लेखेको छ। एकदिन पत्रुस येशूसँगै हुँदा स्वर्गबाट यहोवा परमेश्वर बोल्नुभएको आवाज आएको थियो। यहोवाले तिनीहरूलाई येशू “मेरो प्यारो छोरा हो, म उसलाई माया गर्छु र म ऊदेखि खुसी छु” भन्नुभयो।
चित्रमा तिमीले देखेको अरू मान्छेले पनि येशूको कुरा लेखेका छन्‌। तिनीहरूमध्ये एक जना मर्कूस हो। सिपाहीहरूले येशूलाई समात्दा येशूसँगै भएको मान्छे मर्कूस हुनुपर्छ। त्यतिबेला के-के भयो, उसले सबै लेख्यो। येशूको कुरा लेख्ने अर्को मान्छे लूका हो। ऊ डाक्टर थियो। येशू मरेपछि मात्र लूका उहाँको चेला बनेको हुनुपर्छ।
चित्रमा तिमीले देखेका अरू दुई जना येशूका भाइहरू हुन्‌। तिमीलाई उनीहरूको नाम थाह छ?— उनीहरूको नाम याकूब र यहूदा हो। उनीहरूले सुरुमा त येशूको कुरा पत्याएनन्‌। ‘येशू त बौलायो’ पनि भने। तर पछि उनीहरूले येशूको कुरा पत्याए र उहाँको चेला बने।
तिमीले चित्रमा देखेको मध्ये बाँकी एक जनाचाहिं प्रेषित पावल हो। ख्रीष्टियन बन्नुअघि उसको नाम शावल थियो। ऊ ख्रीष्टियनहरूलाई घृणा गर्थ्यो। पावलले उनीहरूलाई धेरै दुःख दियो। त्यस्तो मान्छे कसरी ख्रीष्टियन बन्यो त?— एकदिन पावल बाटोमा हिंड्दै थियो। आकाशबाट कसैले बोलाएको आवाज उसले सुन्यो। त्यो येशूको आवाज थियो! ‘मेरो चेलाहरूलाई तिमीले किन दुःख दिएको?’ भनेर येशूले उसलाई सोध्नुभयो। त्यसपछि पावल राम्रो मान्छे बन्यो र उसले येशूको कुरा मान्न थाल्यो। ऊ येशूको चेला बन्यो। पावलले रोमीको किताबदेखि हिब्रूको किताबसम्म जम्मा १४ वटा किताब लेख्यो।
हामी दिनदिनै बाइबल पढ्छौं नि, हैन र?— बाइबल पढ्यौं भने हामीले येशूबारे धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। के तिमी येशूबारे अझ धेरै कुरा सिक्न चाहन्छौ?—
२ पत्रुस १:१६-१८
मर्कूस ३:२१; १४:५१
क-कसले येशूको कुरा लेखे?
येशूका दुई जना भाइले पनि बाइबलका किताब लेखेका थिए, तिनीहरूको नाम के-के हो?
कुन घटना भएपछि पावल येशूको चेला बन्यो?